RW Xasan Cali Kheyre oo maanta dib ugu soo laabta dalka, kaddib markii uu.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta RW Xasan Cali Kheyre oo maanta dib ugu soo laabta dalka, kaddib...
RW Xasan Cali Kheyre oo maanta dib ugu soo laabta dalka, kaddib markii uu..
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha XF Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa Jimcihii maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib Socdaalkiisii dalalka Qatar iyo Swizerland.
Kheyre oo socdaalkiisa ka billaabay Qatar ayaa 14-15 Deseembar Dooxa uga qayb galay Madasha Dooxa, waxuuna ka jeediyay khudab uu uga hadlay horumarka Soomaaliya ka jira iyo dowrka ganacsatada ee dib-u-dhiska dalka.
Ra’iisul wasaaraha ayaa intii uu dooxa u joogay ka qayb galka madasha Dooxa waxuu kulamo la qaatay dhiggiisa Qatar iyo xoghayaha maaliyadda Mareykanka.
Sidoo kale Xasan Cali Kheyre oo Deseembar 16, 2019, lagu soo dhaweeyay Geneva, ayaa Deseembar 17-18, 2019 waxuu ka qayb galay madasha qaxootiga adduunka oo markii ugu horresay sanadkaan la qabtay, waxuuna ka jeedyay khudbad uu uga hadlay xaaladda qaxootiga adduunka iyo sida ay muhiim u tahay in la isaga kaashado horumarinta nolosha qaxootiga.
ra'iisul wasaare kheyre oo dalka dib ugu soo laabtay